आमाको आर्तनाद - साहित्य - नेपाल
‘मेरो छोरो आइपुग्यो, आमालाई सम्झेर आइपुग्यो मेरो छोरो ।’ आमाका नाजुक हत्केलामा आफ्नो निधार राखिदिएँ । आमाले मेरो दायाँ हत्केला बिस्तारै आफूतिर तान्नुभयो र स्नेहले चुम्नुभयो । मैले उहाँका सपाट आँखामा अजस्र पीडा र थोरै सन्तुष्टिको तरल रसाइरहेको देखेँ ।
आमा ओछ्यानमा लम्पसार हुनुहुन्थ्यो । टाउको मुडुलो थियो । आँखीभौँ रित्ता थिए । अहो ! आमालाई आफ्नो बाक्लो लामो कपालप्रति कत्रो लगाव थियो । म द्रवीभूत भएँ । गालाको भरिलोपन अब कत्ति बाँकी थिएन । कुपोषित शिशुको जस्तै टिठलाग्दो अनुहारमा याचनाले भरिएका आँखा । त्यो भासको गहिराइ कति थियो, म अन्दाज गर्न सक्दिनथेँ । दन्तलहर पनि अनुहारबाट बाहिर निस्किने अथक परिश्रममा लागेजस्तै देखिन्थे । पिटिक्कै भाँचिएलाजस्तो निगालोसरि घाँटी । अनुहारको दयनीयताबाट सम्पूर्ण शरीरको अवस्था अन्दाज गरेँ । मन भरंग भयो । भित्रभित्रै बगेर गयो आासुको छाँगा ।
अनिश्चित छुट्टी बोकेर आइपुगेको थिएँ, काठमाडौँ ।
कन्चटभरि गाडीको एकोहोरो कर्कस आवाज । छातीभरि धूलो र धूवाँको उकुसमुकुस । हृदयभरि भत्केका धरोहरको खण्डहर । नाकैमुनि फोहोरको पिरामिड । नशानशामा बगिरहेको दुर्गन्धित बाग्मती । ढाड भाँचिने गरी ओहोरदोहोर गरिरहेका अस्तव्यस्त पाइला । मस्तिष्कभरि जबर्जस्ती कोरिएको भविष्यको झूटो आश्वासन । हराभरा उखेलिएर मरुभूमि भएको रुग्ण शरीर । आँखाबाट अविरल बगिरहेको आर्यघाट ।
काठमाडौँ निराश, लाचार, दु:खी, रोगी र असह्य पीडामा छटपटाइरहेको देखेँ । काठमाडौँलाई आमा देखेँ ।
‘यत्तिपछि घर आएको छोरोलाई एकमुठीसम्म पकाएर खान दिन सकिनँ ।’ मातृ–ममताको भारीले मलाई बेस्सरी थिच्यो । लज्जाले मेरो शिर निहुरियो । आमा रातभरि छट्पटिनुहुन्थ्यो । तीन वर्षदेखि लगातार शरीरले केमोथेरापीको घातक रसायन थेगिरहेको थियो । दुखाइ कम गर्ने ओखतीले शरीरलाई टेर्नै छाडिसकेको थियो । पेटमा पानी दिनप्रतिदिन भरिएर दमाहाजस्तै देखिन्थ्यो । पानीको चाप बाहिर फुत्किन खोजिरहन्थ्यो । आमालाई न बस्दा आराम हुन्थ्यो, न त सुत्दा–उठ्दा । ओछ्यानमा घरी यता फर्किनुहुन्थ्यो घरी उता । पीडाको दीर्घ उच्छ्वास निस्किरहन्थ्यो । निदाउन सक्नुहुन्नथ्यो । मूकदर्शक भएर हेर्नुको विकल्प थिएन मेराअघि । घरी आमाको हात बाउँडिन्थ्यो, घरी खुट्टा निदाउँथ्यो । थेरापीको ‘साइड इफेक्ट’ ले कब्जियत थियो । मृगौलाले पनि काम गर्न अटेर गथ्र्यो । घाँटीमा समस्या थियो । आन्द्रामा घाउ थियो । खानैपिच्छे बान्ता हुन्थ्यो । दिसा–पिसाब गर्दा, बोल्दा, खाँदा पीडा थियो । जिउँदो शरीरको हरेक अंगमा असह्य पीडा थियो । लाग्थ्यो, त्यो शरीरभित्र जीवित केही थियो भने केवल पीडा थियो ।
बाबा तीन वर्षदेखि कुन मनोदशामा बाँच्नुभएको होला ? कुन तागतले चौबीसै घन्टा अनवरत सेवामा खटिरहन सक्नुभयो होला ?
दर्द लुकाएर फोनमा बाबा भनिराख्नुहुन्थ्यो– ‘सब ठीक हुँदै छ, पहिलेभन्दा सुधार भ’को छ, चिन्ता नगर ।’ सधैँभरि उहाँलाई सन्तानकै सपनाको चिन्ता लाग्छ । तर आमालाई बाबाको पनि चिन्ता लाग्छ । लाग्यो– हामीसँग जे छ, पोल्टोभरि चिन्ता मात्रै छ !
(जिन्दगीमा सबैभन्दा निरस आफ्नै जिन्दगी लाग्दोरै’छ ।)
‘कमाइले बाटो खोज्छ भन्छन् हो रै’छ’ खुइऽऽऽय सुस्केरा हाल्दै आमा भन्नुहुन्छ ।
तीन वर्षअघि छोरालाई अमेरिकाको कुनै सफ्टवेयर कम्पनीबाट कामका लागि निम्तो आउँदा आमा त्यति खुसी देखिनुभएन । उहाँलाई लाग्थ्यो, जति कमाए पनि मान्छेलाई कहिल्यै पुग्दैन । आफ्नै परिवारनजिकै जे–जति कमाइ छ, मनग्गे छ । तर छोराले अवसर गुमाउन चाहेन । ‘दुई– चार वर्षमा मज्जाले कमाएर फर्कन्छु । काठमाडौँमा घर हुन्छ, गाडी हुन्छ । अर्काको घरमा तल्लो दर्जाको मान्छे भएर कति बस्नु हेपिएर यो सहरमा ?’
आमाका विस्फारित आँखामा आश्वासनको बिस्कुन छरेर छोरो हिँडेको थियो अमेरिका । छोराको प्रगतिमा कुन आमाले बाधा हाल्न चाहन्छिन् होला ?
नेताले जनतालाई दिने आश्वासन र मैले आमालाई दिएको आश्वासनमा अहिले म तात्विक फरक देख्न सक्दिनँ ।
सन्तानलाई के थाहा हुन्छ, आमाबाबा कतिन्जेल साथ रहन्छन् ? हामीलाई लागिरहन्छ, जिन्दगीमा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । बाँकी जिन्दगीलाई राम्रो बनाउने लालसामा आफैँलाई पनि भुलेर यान्त्रिक भइदिन्छौँ । यो जम्मै कुरा थाहा छ र पनि यही दलदलमा भासिनुको विकल्प हामीसँग जिन्दगीभर हुँदैन ।
(जिन्दगीलाई सबैभन्दा धेरै जिन्दगीकै पीर लाग्दोरै’छ ।)
‘ऐया बाबु मरेँ । साह्रै दुख्यो । म के गरुँ ? मरेँ नि बाबु ।’ पेटमा एक्कासि असह्य पीडाले आक्रमण गरेपछि असीम वेदनाले आक्रान्त हुँदै एक दिन आमाले फोन गर्नुभयो । उहाँको आवाजमा गहिरो रोदन थियो । पीडाको सघन आर्तनाद थियो ।
छोरा अमेरिका छिर्नु, आमालाई ठूलै बिमारले बेस्मरी च्याप्नु ।
वेदनाले विह्वलित भएर आमाले दैनिकजसो फोन गर्न थाल्नुभयो । म अत्तालिएँ । आमालाई काठमाडौँ लगियो । उहाँको ओभरीमा देखिएको क्यान्सर कलेजोसम्मै पुगेछ । पाठेघर र कलेजोको केही भाग फाल्नुपर्ने देखियो । अपरेसनपछि किमोथेरापी सुरु गर्नुपर्ने भयो ।
यो अकल्पनीय समाचार थियो । आत्माले विश्वासै गर्न सकेन ।
साँचिएका कति इच्छा छन् आमाका । सन्तानका कति सपना बाँकी छन् । सन्तानसँग अघाउँजी बस्ने आमाको कत्रो अभिलाषा । सबका सब बाँकी छन् । आमालाई जहाज चढाउनु छ, देश घुमाउनु छ, विदेश चिनाउनु छ । बिहान सँगै नास्ता गर्नु अनि बेलुकी दिनभरिका गफसँगै खाना खानु छ । आमाकै नाममा बैंक खाता खोलिदिनु छ ।
आमालाई गुमाउनु थिएन । उपचारका निम्ति ठूलो खर्च लाग्थ्यो । त्यसका लागि कमाउनु थियो । म फर्केर जान सकिनँ । बिरामी हुँदा सन्तान आफूसँगै नहुँदाको रिक्तताले आमालाई कति बिझाउँदो हो ।
मलाई विदेश बस्न पटक्कै मन भएन । आमालाई जसरी होस् बचाउनु थियो । आमाको आयु थप्न म देश जान सकिनँ ।
(बिरामी आमा बिलौना गर्छिन्– ‘बाबु यता भइस् भने त आधा रोग यसै निको हुन्थ्यो अघाउन्जेल कहिले बस्न पाइनँ तँसँग ।’ म छोरो सम्झाउँछु– ‘ यता छु र त आधा रोग निको भइरहेछ आमा, राम्रो अस्पतालमा उपचार गर्नू, सब ठीक हुन्छ ।’)
पोहोरसम्म आमासँग गफ थिए । सपना थिए । सम्भावना थिए । अस्पतालप्रति भरोसा थियो । जिन्दगीप्रति आशा थियो । औषधीले थोरबहुत काम गर्दै थियो । शरीरका अंगले अलिअलि काम गर्दै थिए ।
पोहोरसम्म छोराको कार्यक्रममा जानुहुन्थ्यो आमा । नाटक हेर्न जानुहुन्थ्यो । कविता वाचनमा जानुहुन्थ्यो । अनुहारमा आभा थियो । निको हुने विश्वास थियो । ‘काल पनि किन आउँदैन बाबा मेरो ! काल किन आउँदैन छोरा ! कत्ति अभागी रै’छे तेरी आमा !’ आमाको स्थिति झन्–झन् कहालीलाग्दो हुँदै गयो ।
‘तेरो काखमा मर्न पाए हुन्थ्यो । भगवान् ! मैले के पाप गरेँ ! किन यस्तो हालतमा बचाइराख्यौ नि मलाई ।’
आमालाई लागिरहन्थ्यो– उहाँको कारण सबै परिवारले दु:ख पाइरहेछ । डाक्टर, औषधी, अस्पताल सबले आमालाई चिढ्याउँथ्यो ।
‘अरुका आमाले सन्तानलाई कति खुसी दिन्छन्, मेरो हालत यस्तो छ । न मर्न नै सक्छु, न त बाँचेर सुख दिन । तँ आफ्नो जिन्दगी नबिगार छोरा, म त मर्न पनि नसक्ने भएँ । तेरो सप्पै कमाइ यही आमाको उपचारमा गयो ।’ उहाँ बिलौना गरिरहनुहुन्थ्यो । म आमालाई ढाट्न सक्दिनथेँ । अब कुनै हालतमा ठीक हुनेवाला थिएन । यो कुरा आमालाई छर्लंग थियो ।
‘आमा मेरो चिन्ता नलिनुस् म हजुरसँगै बस्छु ।’ मैले आँसु लुकाएर यति मात्रै भन्न सक्थेँ । आमा वेदनाको शिखरमा हुनुहुन्थ्यो । मोर्फिन– पीडा कम गर्ने अन्तिम अस्त्र । पीडा बीसको उन्नाइस भएजस्तो लाग्दैनथ्यो । शरीरभित्र रोग नफैलिएको सायदै कुनै अंग थियो । खाना रुचाउनदेखि दिसा–पिसाबका लागि औषधी खुवाउनुपथ्र्यो । चर्पी लैजान कम्तीमा दुई जोर बलिया पाखुराको सहारा चाहिन्थ्यो । बिस्तारै–बिस्तारै आमा हर फेर्न पनि नसक्ने हुनुभयो । शरीरको माथिल्लो भाग पनि सुनिदै जान थाल्यो । एकै ठाउँ लम्पसार भइराख्दा घाउ हुन्थ्यो । कोल्टे फेराइदिँदा आमालाई साह्रै दुख्थ्यो । उहाँलाई जहाँ छोयो, त्यहीँ पीडा हुन्थ्यो ।
पलपलको यो दुर्दान्त अवस्थामा आमा कसरी बाँच्नुभयो होला ! पीडाले उहाँ अर्धचेत भएर मसिनो बर्बराउनुहुन्थ्यो– ‘ आमा आमा !’ ।
हामी सबैलाई थाहा थियो, आमा जिन्दगीको अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । डाक्टर, अस्पताल, औषधी केही समय आयु लम्ब्याउने प्रपन्च मात्रै थिए, यो पनि थाहा थियो । ओठबाट शब्द निस्किउन्जेल आमाले बिन्ती गरिराख्नुभयो– ‘नाइँ, मलाई अस्पताल नपठा । प्लिज, छोरा म अस्पताल जान्नँ । मलाई मर्न दे । मलाई अस्पतालमा साह्रै गाह्रो हुन्छ, बा । मलाई अस्पताल नपठा ।’
मैले भनिराखेँ– ‘अस्पताल नगएर झन् गाह्रो होला नि आमा ।’ ‘तँलाई थाहा छैन छोरा – मलाई अस्पतालमा कति गाह्रो हुन्छ ! औषधी चढाउँदा कति पीडा हुन्छ ! औषधीपछि शरीरलाई झन् कति पीडा हुन्छ ! तँलाई थाहा छैन छोरा । मलाई बाँच्न कति गाह्रो छ ! मलाई मर्न दे छोरा, अस्पताल नपठा ।’
हामी अस्पताल चहार्न छाडेनौँ ।
पलपल आमाको जिन्दगी पीडाले आक्रान्त थियो । जिन्दगी जति लम्बिँदै जान्थ्यो, उति पीडा पनि थपिँदै जान्थ्यो । यस्तो विक्षिप्ततामा पनि आमालाई बचाइराख्नुपर्ने यो कस्तो कर्तव्य हो परिवारको ? लगातारको चरम पीडामा कोही कसरी जिउन सक्छ ? यसरी पनि बचाइराख्नु ? योजस्तो ठूलो सजाय के हुन सक्छ यहाँ, कोही–कसैका लागि ? कसका लागि आमाको विषाद जिन्दगीमाथि विष थपिरहेछौँ ? हामीलाई किन यस्तो लाग्छ– बचाउनु नै प्रेम हो, कर्म हो, धर्म हो !
जे–जस्तो भए पनि सायद आमा जिउँदै छिन् भन्ने आभास खोज्दो रहेछ सन्तान । आमा जिउँदै हुने सन्तानले कहिल्यै रित्तो महसुस गर्नुपर्दैन, चाहे आमा अचेत भएर पल्टिरहेकै किन नहोऊन् । सायद यही स्वार्थ थियो कि !
काललाई घुस दिएरै सही, आमाको आयु थप्दै थिएँ । आमालाई मर्नका निम्ति म छाड्न सक्दिनथेँ । तर बाँचिरहेकी आमाको यो अवस्था हेर्न सक्दिनथेँ, पटक्कै सक्दिनथेँ ।